Nosy Hara: hatao toeram-pizahantany avo lenta | NewsMada
Nitsidika ny Nosy Hara any Antsiranana, kaominina Mangaoko, distrika Antsiranana II, ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny harena lovainjafy (Medd), Rtoa Raharinirina Baomiavotse Vahinala, ny 28 novambra teo. Anisan’ny voasokajy ho valanjavaboahary an-dranomasina, ny taona 2011 ity nosy ity, tantanin’ny Madagascar national park (MNP), manana velarana 125.741 ha.
Mampiavaka ny Nosy Hara, ny fananany Nosy kely maro miisa 15, mitahiry ny harena voajanahary tsy hita raha tsy ao amin’ity toerana ity. Anisan’izany ny Ankoay, ny tanalahy, ary isan’izany ny tanalahy madinika kely indrindra maneran-tany, hitan’ny manam-pahaizana vao tsy ela akory izay.
Eo koa ny horoko, na harambato korandriaka (recif coralien), ny ala honko ary ny ahitra maniry any anaty ranomasina. Manana ny lanjany ny Nosy Hara noho izy toerana fanatodizan’ny soka-dranomasina.
Jono tsy ara-dalàna
Nilaza ny minisitra Raharinirina Vahinala, fa tanjon’ny minisitera Medd, ny hanaovana ity nosy ity ho toeram-pizahantany avo lenta. Hampiroborobo ny toekarena sy ny fiainan’ny mponina any ifotony izany.
Tsindry mihatra amin’ny Nosy Hara, ny fiovaovan’ny toetr’andro, manafotsy ireo horoko. Eo koa ny jono an-dranomasina tsy manara-dalàna sy ny fampiasana fitaovam-panjonoana voararan’ny lalàna, toy ny tavoahangy misy etona (bouteilles de plongées).